Akanjo landy | Famokarana sy orinasa mpivarotra mahafinaritra voafetra
Karazana varotra mafana
Serivisy ho an'ny CUSTOM
sary famantarana ny amboradara manokana
marika fanasana manokana
famolavolana pirinty manokana
Inona no dikan'ny 6A amin'ny lamba landy mulberry 100%?
Matetika, ny vokatra vita amin'ny landy dia omena isa A, B, C. Raha ny grade A no tsara indrindra amin'izy rehetra manana kalitao avo indrindra, ny grade C no ambany indrindra. Ny landy kilasy A dia tena madio tokoa; azo vahana hatramin'ny halavany be izany nefa tsy tapaka.
Toy izany koa, ny vokatra vita amin'ny landy dia isaina isa ihany koa izay mitaky dingana farany.
Ohatra, afaka manana 3A, 4A, 5A, ary 6A ianao.
6A no landy avo indrindra sy tsara indrindra. Midika izany fa rehefa mahita vokatra vita amin'ny landy vita sokajy 6A ianao dia io no kalitao avo indrindra amin'io karazana landy io.
Ho fanampin'izany, ny landy misy kilasy 6A dia mitentina lafo kokoa noho ny kalitaony noho ireo avy amin'ny landy kilasy 5A. Midika izany fa saron-ondana landy vita amin'ny landy Kilasy 6A dia ho lafo kokoa noho ny landy tsara kalitao kokoa ampiasaina noho ny ondana ondana vita amin'ny landy Kilasy 5A.
Inona no tokony hataonao alohan'ny hividianana fatoriana landy?
Ny fandokoana loko dia iray amin'ireo antony mahatonga ny mpanamboatra sasany hamoy ny mpanjifany. Sa inona no antenainao amin'ny mpanjifa izay tsy nahazo lanja tamin'ny volany? Tsy misy fomba hiverenany any amin'ilay mpanamboatra mitovy amin'ny fividianana fanindroany.
Alohan'ny ahazoanao akanjo fatoriana lamba landy, angataho ny mpanamboatra anao hanome anao ny tatitra momba ny fahasarotan'ilay lamba landy. Azoko antoka fa tsy mila lamba landy miova loko ianao aorian'ny fanasana azy indroa na intelo.
Ny tatitry ny laboratoara momba ny fandokoana dia mampiseho fa maharitra ny lamba vita amin'ny lamba.
Mamelà ahy hanazava fohifohy hoe inona ny haingam-pandehan'ny loko dia ny fizahan-toetra ny faharetan'ny lamba iray, amin'ny fomba haingana hamaly ny karazan'ireo mpandraharaha manjavona.
Amin'ny maha-mpividy anao, na mpanjifa mivantana na mpivarotra ambongadiny / mpivarotra ambongadiny, tsy maintsy fantarinao ny fihetsiky ny lambam-pandriana lamba landy novidinao tamin'ny fanasan-damba, fanosehana ary ny tara-masoandro. Fanampin'izany, ny faharetan'ny lokony dia manambara ny haavon'ny fanoherana ny hatsembohana.
Azonao atao ny misafidy ny tsy hijery ny antsipirian'ny tatitra raha mpanjifa mivantana ianao. Na izany aza, ny fanaovana izany amin'ny mpivarotra dia mety hametraka ny orinasanao amin'ny slip slip. Fantatro sy ianao fa mety handroaka ny mpanjifa hiala aminao izany raha toa ka ratsy ny lamba.
Ho an'ny mpanjifa mivantana, ny safidy raha tsy jerena ireo antsipirian'ny tatitra haingana indrindra dia miankina amin'ny antsipiriany kasaina amin'ny lamba.
Ity ny safidinao tsara indrindra. Alohan'ny fandefasana azy dia alao antoka fa izay atolotry ny mpanamboatra dia mifanaraka amin'ny zavatra ilainao na ny takian'ny mpanjifanao kendrena araka izay tratrany. Amin'izany dia tsy mila miady mafy amin'ny fitazonana ny mpanjifa ianao. Ny soatoavina dia ampy hisarihana ny tsy fivadihana.
Fa raha tsy misy ny tatitra momba ny fanandramana dia azonao atao ny mihazakazaka manamarina ny tenanao. Mangataha ampahany amin'ilay lamba novidinao tamin'ny mpanamboatra azy ary sasao amin'ny rano klorinina sy ranomasina. Aorian'izay, kitiho amin'ny vy fanasan-damba mafana. Ireo rehetra ireo dia hanome anao hevitra ny faharetan'ny akanjo vita amin'ny lamba landy.
Ny fitaovana landy dia mateza, na izany aza, tokony hokarakaraina tsara. Raha misy mihasimba ny fitafianao ka azonao atao ny mamerina azy io amin'ny fanarahana ireo fomba voalaza etsy ambony.
MANDAISA VE NY SORA NY SLEEPWEAR COLOR? ? ？
Pls jereo ny tatitra momba ny fitsapana SGS avy aminay. Hialana ny lokon'ny loko.
Ahoana no ahafahantsika manampy anao hahomby?
Antoka azo antoka
Matotra hatramin'ny materais manta ka hatramin'ny fizotran'ny famokarana rehetra, ary diniho tsara ny andiany tsirairay alohan'ny fiterahana
Serivisy ambany MOQ ambany serivisy
Ny hany ilainao dia ampahafantaro anay ny hevitrao, ary hanampy anao izahay hanamboatra azy, manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny tetikasa ary hatramin'ny tena vokatra. Raha mbola azo zaitra io dia afaka mamorona azy isika. Ary ny MOQ dia 100 pcs fotsiny.
Logo maimaim-poana, marika, famolavolana fonosana
Alefaso fotsiny aminay ny sary famantarana, marika, famolavolana fonosana, hataonay ny mockup mba hahafahanao manana ny Visualisation hanao ilay saron-doha landy tonga lafatra, na hevitra iray izay azonay aingam-panahy
Fanaporofoana santionany ao anatin'ny 3 andro
Rehefa avy nanamafy ny kanto isika dia afaka manao ny santionany ao anatin'ny 3 andro ary mandefa haingana
7-25 Andro fandefasana am-be
Ho an'ny tratra ondana landy mahazatra sy habe ambanin'ny farakodia 1000, ny fotoana itarihana dia ao anatin'ny 25 andro aorian'ny filaminana.
Serivisy FBA Amazon
Fanandramana manan-karena amin'ny fanontana code code UPC Amazon Operation Process maimaimpoana & manaova labelingia & sary HD Free